“Waar waynu isgaranaynaaye waa kee Ninka nin u caga-juglaynayaa? Mujaahid Dhegaweyne | Berberanews.com
Home WARARKA “Waar waynu isgaranaynaaye waa kee Ninka nin u caga-juglaynayaa? Mujaahid Dhegaweyne
“Waar waynu isgaranaynaaye waa kee Ninka nin u caga-juglaynayaa? Mujaahid Dhegaweyne
Hargeysa(Berberanews):- Siyaasiga Ibraahim Cabdilaahi Xuseen (Dhagaweyne), ayaa sheegay in loo baahan yahay in talo ballaadhan laga yeesho sidii Dadka reer Somaliland ay uga bixi lahaayeen Dulmi uu sheegay inuu dalka hadheeyey, isla markaana uu ku dooday inuu gaadhay heer aanu gaadhin dulmigii SNM ka dagaallantay ee laga tirsanayey dawladdii Millateriga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre hoggaaminayey ee Soomaaliya.
Ibraahin-dhegaweyne oo hadal ka jeediyey Shir magaalada Burco uga qabsoomay Beelaha Waqooyiga iyo Galbeedka Burco oo uu ka qaybgalay, ayaa sheegay inaanay jirin cid awood u leh inay is-hor-taagto in Bulshada ama Beeluhu aayohooda, danohooda iyo waxay wajahayaan mustaqbalka ka shiraan oo ay ka wada tashadaan, isagoo tilmaamay inaanay jirin cid cid u caga-juglayn karta iyo cid cid xorriyaddeeda ku xad-gudbi kartaa toona.
“Waxaan leeyahay caga-juglayn cidna wax lagaga qaadi maayo, waar waynu isgaranaynaaye waa kee Ninka nin u caga-juglaynayaa? Waa kee Ninka Nin xorriyaddiisa ka qaadayaa? Waar waxaynu ku soo dhimannay Ninka kufsanayaa waa kee? Waxaan leeyahay malaha in badan baynu innagu isa saamaxnaye waynu xisaabtami doonnaa, Ninka cid u caga-juglayn kara, Ninka wax xidhi kara iyo Ninka wax samayn kara, meeshu miyaanay Burco ahayn? Waar waxaas la isugu joojin maayo.” Sidaa ayuu yidhi Ibraahin-Dhagaweyne.
Waxaanu Dhagaweyne oo hadalkiisa sii wataa intaas ku ladhay oo uu yidhi; “Maanta doorasho ma jirto, meel ay taallo ma garanaysaan? Laba bilood iyo badh baa ka hadhay, wax alla wax loo diyaariyey oo arrin ah oo la wadaa ma jiraan, dawladdanna laba bilood iyo badh buu wakhtigu kaga dhan yahay, waa la korodhsaday.. La kordhi, la kordhi Baarlamankii wakhtigu ka dhac, Guurtidii ka dhac, Xukuumaddii ka dhac ee xaggee la qabanayaa? Kol maaha, laba maaha oo saddex maaha.:
Dhagaweyne oo ka hadlaya dulmiga faraha badan ee uu sheegay inuu Somaliland ka jiro iyo arrimo kale, waxa uu yidhi; “Meeshan waxa ka taagan dulmi kii ugu xumaa ee Bina-aadamku diidi jireen, weli may gaadhin dawladdii Afweyne halkaa, Ninkii Rag ahina waa ogyahay, wixii aynu la dagaallamaynay waxaas oo dulmi ah weli may gaadhin, waxa weeye waynu ka tashanaynaa, shirka halkan ka bilaabmayna waa bilawgii talada, xaq baad u leedihiin talada, xaq baynu u leenahay inaynu ka tashanno oo kaynu garan wayno nidhaahno; ‘naga tag’ Nin idiin qabsaday miyuu jiraa ama gobol ha ahaado ama dawlad sare ha ahaadee? Wakhtigaagi wuu dhammaaday halkanna ka talin maysid inaynu nidhaahno weeye. Shirkaad halkan ka bilawdeen Somaliland oo dhami way sugaysaa, dalkani ama wuu innagu burburayaa ama Burco ayaa laga badbaadin jiraye waynu badbaadinaynaa.”
“Mid Burco jooga, mid Berbera jooga, mid Boorama jooga iyo mid Laascaanood jooga waa la inna eegayaa oo waxa la eegayaa halkan waxaad ka bilawdeen inaad dalka gaadhsiisaan, inaynu tashanno cidna ka qarin mayno, cidna ku dulmiyi mayno, Qof kasta oo bina-aadam ahi waxa la yidhi tashado, waa wax xaq ah in laga tashado masiirkiinna, Ubadkiinna, meeshay taladu ku dambaynayso iyo sidaynu noqonayno, haddaan Bina-aadamku wax is-weydiin xoolo maaha iska soconaya.” Sidaa ayuu yidhi Ibraahin-Dhagaweyne.
Ibraahin-dhegawayne oo la hadlayey labada Beelood ee qabsaday Shirka uu Burco kaga qaybgalay ee uu hadalkan ka jeediyey, waxa uu yidhi; “Waxaan idin leeyahay waad mahadsantiin, wax baad bilawdeen, cidla ha kaga tegina, Annaguna inaannu idinkala soo qaybgalno shirkan waannu ku faraxsannahay, ee yey innaga dhicisoobin taladaasi ee hareeraha aynu iska taagno. Xaq bay u leeyihiin labadan Beelood illaa iyo Badda illaa iyo Dannood bay wada deggan yihiin, waa Dad wada dhashay, waa Dad ehel ah, cidina ma dhex-geil karto, cidina ma kala go’yn karto, waa kee Ninka kala go’yn karaa? Cidna xumaan uguma maqnin, cidna waxba laguma yeelayo, dantana waa laga wada-tashanayaa, sidaa ay u bilaabantay ayey u soconaysaa, wanaaggana gaadhsiiya dalka, ummadda Somaliland-na maanta talo ayey u baahan tahay, shirkanna waa la eegayaa oo waa la idin eegayaa.”
Xigahso Wargeyska Ogaal
Previous articleNuxurka kulan dhexmaray Madaxweynaha iyo Ganacsatada Xoolaha la joojiyay ka dhoofisa Berbera
Next articleXaalad ka Taagan Masuuliyinta Shirkada laydhka ee Laascanood (LESCO) oo labba Bilooda Xidhan, waxgaradka G/sool oo cadaalad daro ku sifeeyey iyo Maxkamada Gobalka Sool Oo Ka Hadashay.